Magic Microfiber Deg Deg ah Timaha Qalalan
Color Green White Pink Guduud Orange Blue kafeega Purple Navy Blue
60x25cm / cagaar 60x25cm / Caddaan 60x20cm / Pink 60x25cm / Pink 60x25cm / Rose red 60x20cm / Rose red 60x20cm / Liin dhanaan 60x25cm / Liin dhanaan 60x20cm / Buluug 60x25cm / Buluug 60x25cm / coffee 60x20cm / Midab 60x20cm / Navy Blue 60x20cm / coffee 60x25cm / Midab 60x25cm / Navy Blue 60x20cm / cagaar 60x20cm / Caddaan
Magic Microfiber Quick Dry Hair Towel - 60x25cm / Green gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca: Timaha Timaha
Waxyaabaha: Microfiber Fabric
Nambarka Tusaalaha: 453672
feature: Mashiinka Washable, Deg-deg ah,Cadaadis
Dadka lagu dabaqi karo: Haweenka / Ragga / Dhallinta
Miisaan: 3.40 Oz (96.38g)
Mashiin Washable: Haa
Button aamin ah: Haa
Nadiifinta Nadiifinta: ma jilciso, nadiifiyeyn ama nadiifin qallalan
Dharka microfiber waa fiiloyinka dabiiciga ah, waxay la xiriiraan maqaarka iyagoon wax dhibaato ah soo gaarin, waxay leeyihiin maqaar-u fiican saaxiibka
Cabbirka: 60x20cm / 60x25cm
Biyo-qabatin heer sare ah, deg-deg-deg-deg ah, waqti badbaadin, timahaaga qallajinta 100% si dabiici ah Degdeg Deg Deg ah oo Deg Deg ah oo Timo-Gallad ah! Timaha timaha korantada looma baahna! Waxay yareysaa halista kala goynta.
Qalabka degdegga ah ee loo yaqaan 'Timo Magic Dry Timo Cap' wuxuu ku habboon yahay isticmaalka maalin kasta ee guriga, jimicsiga iyo socodka. Waxay u fiican tahay qubayska, qurxinta, iyo wajigaaga maydhista. Ku habboon dhammaan noocyada timaha iyo dhererka oo dhan.
U adeegso si tartiib tartiib ah u waxyeeleeya timahaaga qurxoon. Furka qallalan wuxuu ka qaadaa qoyaanka timaha. Tani waa habka ugu jilicsan uguna burburka badan ee timaha dhaadheer oo qallalan.
Isticmaalidda timo-dhaqe ayaa waxyeelo badan u geysan kara timahaaga. Koofiyadan timaha qallalan waxay timahaaga ka dhigi karaan qalalan shan daqiiqo. Waxay qaadataa shan daqiiqo oo keliya. Kaalay oo tijaabi inta lagu gudajiro mudada dalacsiinta.
Laabo si timahaagu u jilba joogsado, timaha tuwaal ugu xir madaxa korkiisa (dhamaadka badhanka)
Ku duub timahaaga qayb ka mid ah tuwaalka
Xadhiga aaminka ah kor ugu soo qaad madaxaaga oo ku hagaaji badhanka aaminka ah.
Xusuusin: Midabka dhabta ah ee shayga ayaa laga yaabaa inay waxyar ka duwanaan karto sawirada la soo bandhigay ee ay sababaan arrimo badan sida dhalaalka kormeerahaaga iyo iftiinkaaga iftiinka. Fadlan u oggolow leexasho yar oo cabirka ah.
Waxay umuuqataa mid wanaagsan, wali iskama dayin laakiin waxay umuuqataa tuwaal timo wanaagsan
се отлично. о 3 нед. ачество хорошее.
Mid baan isu soo iibsaday, midna sidii hadiyad. Kaliya waxaan adeegsaday dhawr jeer, waxayna umuuqataa inay timohaygu ka yara yaraanayaan sida caadiga ah. Waxay dareemeysaa xoogaa xoogaa weyn, laakiin taasi waa u fiican dadka leh timo dheer. Badeecada sida lagu tilmaamay, oo si dhaqso leh ku timid.
Macaamiishu waxay noo qiimeeyaan 5.0 / 5 oo ku salaysan dib u eegista 49240.